CUPS: Ahoana ny fampiasana sy fanamboarana ireo mpanonta amin'ny fomba mora | Avy amin'ny Linux
CUPS: Fomba fampiasana sy fanamboarana ireo mpanonta amin'ny fomba mora
phico | | soso-kevitra, Tambajotra / seriver
Anisan'ireo fonosana naroso apetraka rehefa manamboatra fametrahana vaovao, dia kaopy y kaopy-pdf.
kaopy: "Common UNIX Pirinty natao pirinty" na Common Pirinty natao ho an'ny UNIX, dia rindrambaiko matanjaka izay ampiasaina hanonta avy amin'ireo rindranasa napetraka isan-karazany toy ny browser izay ampiasainao ankehitriny hamakiana ity lahatsoratra ity.
Raha ny mahazatra, raha misafidy ny fametrahana feno ny tontolon'ny Desktop GNOME isika, dia apetraka amin'ny alàlan'ny default ny fampiharana iray hitantanana ireo mpanonta amin'ny alàlan'ny interface graphique voasoratra ao amin'ny Python amin'ny alàlan'ny GTK +: system-config-mpanonta ho an'ny GNOME ary system-config-mpanonta-kde ho an'ny KDE.
Tsy mamporisika ny hifantina an'io fonosana io izahay amin'ny voalohany satria ny fametrahana ny kaopy dia miaraka a interface tsara amin'ny tranonkala matanjaka tokoa ary ny momba an'ity lahatsoratra ity. Tsy hanoratra lahatsoratra hisolo toerana ny fanampiana miaraka aminy mihitsy izahay, fa hampahafantatra anao ny tontolo mahavariana amin'ny fanontana Linux amin'ny alàlan'ny kaopy.
Tena mahamenatra ny Fanampiana an-tserasera saika amin'ny teny anglisy daholo. Heveriko fa ao amin'ny Tranokala ofisialin'ny CUPS misy dikanteny espaniola azo jerena. Ho an'ireo mahalala anglisy be dia be handika azy, IZAY IZAY REHETRA MANORANA
vakio ny fanampiana an-tserasera ary tadiavo ny herin'ity rindrambaiko ity, izay azo ampiasaina hanonta avy amin'ny a toeram-piasana an-trano, mandra-pametrahana a mpizara pirinty marobe.
Ho an'ireo izay tsy mahalala afa-tsy ny Espaniôla, ireo andalana fampidirana vitsivitsy amin'ny pejy tsirairay dia hanampy azy ireo hanomboka hampiasa an'ity interface ity. kaopy mitaky entana maro toy izao.
Izahay dia manondro ny adiresy an'ny localhost amin'ny alàlan'ny seranan-tsambo 631 ary aseho anay ny pejy fandraisana an'ny kaopy.
1 Ampio Printer
2 Hizara ny mpanonta anay.
3 Hizaha ny mpanonta zara,
4 Apetraho amin'ny client Windows XP izany
Andao atao hoe manana mpanonta isika HP LaserJet 1100 mifandray amin'ny ekipanay. Azoko antoka fa efa hitan'ny kaopy, saingy hevero fa mbola tsy mifandray ary hampindraminy antsika izy ireo ary te hiomana izahay. Andao mankany amin'ny pejy Administración ary tsindrio ny bokotra
Ampio Printer. voalohany kaopy mitady mpanonta mifandray. Raha tsy mahita azy dia haseho ity pejy fifampiresahana manaraka ity:
Eritrereto hoe misy ifandraisany amin'ny seranana LPT # 1 ity. Aorian'ny fisafidianana azy dia tsindrio manaraka ary aseho antsika ny pejy fifanakalozan-kevitra iray hafa
Hofenoinay ny angona angatahin'izy ireo amintsika ary hofantarinay raha te hizara izany izahay na tsia:
A maika manaraka, aseho antsika ny pejy fifanakalozan-kevitra iray hafa izay ahafahantsika misafidy ny mpanamboatra ny mpanonta na manome rakitra PPD (Famaritana mpanonta Lahatsoratra).
rakitra * .ppd hita amin'ny ankamaroan'ny kapila fametrahana pirinty. Izy ireo dia rakitra an-tsoratra tsotra izay mamaritra ny toetra sy ny fahaizan'ny mpanonta iray na maromaro. Ny fanampiana an-tserasera amin'ny antontan-taratasy dia mazava tsara momba ny fampiasana ireo rakitra ireo sy ny mpamorona ppdc.
Aorian'ny safidintsika ny mpanamboatra HP ary tsindrio manaraka, aseho antsika ny pejy fifanakalozan-kevitra iray hafa hisafidiananay ny maodely manokana:
Ao amin'io boaty io no fidintsika HP LaserJet 1100 - CUPS + Gutenprint v5.2.6 (en) ary rehefa avy manindry Manampia mpanonta, aseho antsika pejy izay ahafahantsika manamboatra azy io arakaraka izay ilainay:
ary farany manindry isika Hanova safidy default.
Taorian'ny nanamafisan'ny CUPS ny fanovana, segondra vitsy taty aoriana dia naseho ny pejin'ny satan'ny mpanonta vao nampiana, na raha maika isika dia tsindrio ny rohy HP-1100.
ary raha safidintsika eo amin'ireo kiheba ambony ilay lohateny mpanonta, ho hitantsika ireto manaraka ireto:
Jereo ny fisehoan'ny mpanonta kaopy-pdf miaraka amin'ny anarana PDF.
Hizara ny mpanonta anay.
Tianay ny mizara ilay HP-110 vao napetraka mbola tsy mifandray. Raha ny marina dia nisafidy izahay fa te-hizara azy io rehefa nanampy azy, saingy ilaina ny manao dingana iray hafa.
Tsy maintsy mankany amin'ny pejy isika Administración, ary ao amin'ny ampahan'ny Fikirakirana server mifidy safidy Mizarà mpanonta mifandraika amin'ity rafitra ity ary raha te-hanonta mampiasa URL (soso-kevitra) mifidy ny safidy koa izahay Avelao hanonta Internet.
Ny bokotra ihany no mila tsindrio Hanova ny toe-javatra ka maharitra ny fanovana eo amin'ny mpizara. Ity hetsika ity dia hamerina ny CUPS ary hiverina amin'ny pejy fidirana. Administración.
Hizaha ny mpanonta zara,
Nanandrana tamina tambajotram-pifandraisana tahaka izao aho:
Mpizara CUPS: Masinina birao. gandalf.amigos.cu.
Mpanjifa CUPS: Laptop. xeon-pc.amigos.cu. IP 10.1.1.100
Nanokatra browser aho tamin'ny solosaina finday misy ny adiresy http: // localhost: 631, nankany amin'ny pejy aho mpanonta, ary nisy ilay mpanonta HP-1100 nozaraina tamin'ny URL http://10.1.1.1:631/printers/HP-1100.
Azontsika atao ny mahita ny URL amin'ny alàlan'ny fametrahana ny kursor amin'ny rohy HP-1100 ny pejy. Ho an'ny firaketana dia saika teo noho eo ny fizotran'ny fikarohana sy fametrahana ny mpanonta amin'ny solosaina finday.
Apetraho amin'ny client Windows XP izany
Raha te hametraka azy amin'ny client Windows XP ohatra isika dia hanao Trano -> Printer sy Fax -> Ampio Printer -> Manaraka. Safidintsika ny safidy "Fanontana tambajotra na mpanonta pirinty mifandray amin'ny solosaina hafa" -> Manaraka. Safidintsika ny "Mifandraisa amin'ny mpanonta amin'ny Internet na amin'ny tamba-jotra na fikambanana ao an-tranonao", ary amin'ny adiresy URL ampidirinay:
Ny boaty fifampiresahana "Safidio ny mpanamboatra sy ny maodelin'ny mpanonta anao. Raha manana… ". Nisafidy ny mpanamboatra HP sy ny maodely HP LaserJet 1100 (MS) izahay izay akaiky indrindra.
Rehefa avy nampifandray ny mpanonta izahay, dia nanao pirinty pejy fanandramana ary nanandramana ny fametrahana azy manontolo amin'ny Windows.
Raha mandeha amin'ny interface web an'ny mpizara ihany koa isika kaopy ho hitantsika eo amin'ny pejy asa ahoana ny fanontana ny pejin'ny fitsapana na tsia. Ampio fotsiny izany mba hanafoanana ny asa fanontana dia mila ny anaran'ny mpampiasa sy ny teny miafinao fakaraha tsy hoe manana mpampiasa hafa hitantana asa printy izahay.
Ny mpanamboatra mpanonta tsirairay dia samy manana ny bokiny avy, ary ny fanontana dia mety ho lasa asa sarotra tokoa. Iray amin'ireo "kilasika" amin'ity lafiny ity araka ny zavatra niainako manokana ny Hewlett Packard, izay tato ho ato dia toa mifikitra amin'ny faratampony: "Fa maninona no ataovy mora ny zavatra raha toa ka vitantsika ny manao azy ho sarotra be."
kaopy manao izay fara heriny mba hanafenana ireo olana ateraky ny mpanonta sy ireo izay mifandraika amin'ilay fampiharana tiana hanontana azy, mba hahafahantsika mifantoka bebe kokoa amin'ny zava-misy printy ny tenany fa tsy ao amin'ny Ahoana ny fanontana. Toy ny fitsipika ankapobeny, ny hany fotoana ilaintsika hahafantarana ny lafiny rehetra amin'ny mpanonta anay dia ny ampiasantsika azy voalohany. Na izany aza ary tena matetika, kaopy alaivo an-tsaina ny "fomba" hanaovana ho anao.
Majika? Tsia mihitsy. Ity no tontolon'i Debian
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » soso-kevitra » CUPS: Fomba fampiasana sy fanamboarana ireo mpanonta amin'ny fomba mora
SuTabacoMisaotra anao dia hoy izy:
Mivantana mankany amin'ny FAVORITES ity lahatsoratra ity.
Valio ny SuTabacoMisaotra anao
Fanontaniana ho an'ireo rehetra nanamboatra CUPS, tsy sendra nanjavona tampoka ireo mpanonta izay namboariny tao amin'ny CUPS? Mitranga amiko matetika izany. Ny zavatra tsikaritro fa ny fisie printers.conf dia "flush" ary ny iray hafa antsoina hoe "printers.conf.O" dia noforonina niaraka tamin'ny fikirakirana rehetra, ny ataoko dia mamafa ny rakitra voalohany ary manonona ny anarana faharoa hanarenana ny fanahafana. Fa hafahafa be amiko izany rehetra izany.
Bray dia hoy izy:
mpanonta saka.conf.O> mpanonta.conf
ampy izay, tsy hisy intsony.
Ny Cups no serivisy fanontana mahery vaika indrindra amin'ny Linux.
Raha mila fanampiana ianao amin'ny olana momba ny fanontana + samba + linux + ti amin'ny ankapobeny, mandefasa mailaka amiko, raha vantany vao azoko atao dia hamaly anao aho.
dinformationt ao amin'ny gmail dot com
Valiny tamin'i Bray
Miarahaba ny mpanoratra aho tamin'ny asa navoaka teto.
Tsy mbola nanana olana tamin'ny fananganana sy ny fampandehanana ny mpanonta USB HP LaserJet 1018 aho, afa-tsy ny fizarana Manjaro Linux 0.8.4. Niezaka ny fomba fantatra rehetra aho, tsy misy valiny tsara, mazava ho azy. Raha ny marina ny rafitra misy ahy dia manondro fa nampiana ny mpanonta, saingy tsia, tsy izy ary raha ny marina dia tsy manonta. Mety tsy hita ny mpamily foo2zjs-20130219-1, na tsy haiko, na dia tsy ho fantatro aza ny fomba fametrahana azy amin'ity rafitra ity.
Manantena aho fa hisy hanome ahy tanana. Amin'ny asako ny mpanonta dia mifandray amin'ny PC misy Windows XP. Ahoana no ahafahako manonta avy amin'ny solosainako amin'ny alàlan'ny tamba-jotra? Misaotra anao.
Andriamatoa Mainty dia hoy izy:
Raha manana Gnu / Linux ilay solosaina finday dia tokony hataonao amin'ny alàlan'ny SAMBA izany
Mamaly an'Andriamatoa Black
Misaotra anao mamaly dia ho hitako raha mahita zavatra aho.
Tena tsara. Misaotra betsaka!
Misaotra ny REHETRA amin'ny fanehoan-kevitra sy ny fahombiazana !!!
Nampidirina tamin'ny tianao indrindra ary nizara 🙂 lahatsoratra tena tsara
Indraindray ny kaopy dia tsy mandeha amin'ny famolavolana default, farafaharatsiny fiezahana hametraka mpanonta laserjet hp 1020 amin'ny debian dia tsy azo natao. Mba hahafahako mandrindra izany "marina" dia tsy maintsy nitady safidy hafa aho.
Niezaka nanonta tamin'ny HP LJ 1000 tao amin'ny Ubuntu 12.04 aho, hitako ny fanampiana miseho amin'ny WEB ary tsy nahavita na inona na inona aho, anisan'izany ny hita ato amin'ity lahatsoratra ity ary koa ny fanamafisana amin'ny alàlan'ny HPLIPS, azonao omena tanana ve aho ? Efa tena kivy aho ary izaho irery no ao amin'ny sampan-draharaha mampiasa Linux te-hampiseho fa miaraka amin'ity rafitra ity dia tratra ny zavatra tsy mitovy amin'ny Windows, alaivo an-tsaina hoe tsy manana fanohanana ny Windows 7 sy 8 ity mpanonta ity, ka olana amin'ny voninahitra ho an'ny Linux dia manaporofo fa mahavita izany. Misy hevitra ve?
Vao haingana aho no nametraka an'i Debian Weezhy Xfce ary rehefa avy nametraka ireo fonosana ilaina sy nisintona ny fanampiana ilaina nandritra ny fametrahana azy dia tsy nisy fomba azoko nampidirina ilay mpanonta HP LaserJet 1018 falifaly, izay, rahateo, efa tranombakoka efa ho tranombakoka. Ao amin'ny Google Nahita baiko vitsivitsy aho ary nampidina fonosana kely izay zara raha nisy 1500 kby. Aorian'izany dia nahavita nanampy ny mpanonta fanoherana niaraka tamin'ny localhost aho ary any io no miasa. Tena ratsy aho fa tsy nanisy fiheverana ireo baiko hanaraka azy, fa avy amin'izay azoko vakiana amin'ny teny Anglisy mahatsiravina ahy, ny fizarana sasany dia tsy manome ny fanampiana ilaina intsony amin'ny fampidirana ny mpanonta.
lahatsoratra tena tsara, fa…. Dingana maro be hanampiana mpanonta, mbola mampiasa system-config-printer aho izay tsotra sy mivantana kokoa, nefa tsy mila manoratra be loatra. Fotoana izay nanatsoran'ny linux asa vitsivitsy kokoa nefa tsy nohazavaina loatra.
Hadinoko, tsy tokony hanafina ny olana be loatra ry zareo, heveriko fa manasarotra kokoa azy ireo izany. Ao amin'ny 2013 isika fa i debian sy linux amin'ny ankapobeny dia mametraka ny batery,
Erick dia hoy izy:
Ity lahatsoratra ity dia tara tara roa taona taty amiko, hitako ny lalana sarotra, roa taona lasa izay, fa fitaovana tsara, arahaba
Valiny tamin'i Erick
Diego Rios dia hoy izy:
Alina ny alina dia mila mampifandray PC roa amin'ny tamba-jotra linux aho, misokatra amin'ny lozisialy iray sy mpanjifa volamena, mila mametraka mpanonta aho ary afaka manana izany ao anaty kaopy avy amin'ny mpizara ahoana no fomba anaovako azy amin'izay ahafahako mijery fisaorana feno
Mamaly an'i diego rios
kaopy + samba na kaopy + ipp
Fabian Barrera placeholder sary dia hoy izy:
Misaotra anao indrindra. Tsy azoko hoe maninona i Debian no tsy afaka manamboatra pirinty autodetect ary tokony hatao io fomba io. Mamerina ny fisaorana anao.
Valiny tamin'i Fabian Barrera
Eny, raha ny marina, raha mametraka debian mifandray amin'ny subnet misy loharanom-pahalalana zaraina ianao, dia mampifandray azy ireo amin'ny fametrahana raha tsy mila fanamarinana izy ireo, fa kosa hampiroborobo anao amin'izany, raha sendra mifandray (andao lazaina hoe efa napetraka ny masinina) izay kinova debia dia ahafahanao mahita amin'ny fivezivezena amin'ny loharano, ny "loharano" mifandraika amin'io tambajotra io, tsy mila apetraka akory ny serivisy smb, satria avahi-deamon (daemon amin'ny unix rehetra) dia mitandrina an'ny Ity, ny fanomezana anao karazana hadisoana sasany dia hafa (misy ny lesoka izay tsy hita ary tsy maintsy tadiavinao), raha izany ianao raha tafiditra ao anaty sehatra fametrahana samba ary dia izay.
Leps86 dia hoy izy:
POST tena tsara, tena ilaina tokoa, hany ka nahatonga ny fahalianana hahafantatra ahy. Androany aho nividy HP 2050 satria hita eo amin'ny pejy http://h-node.org/home/index/es ( http://h-node.org/printers/catalogue/es/1/1/undef/undef/undef/undef/undef/undef?search_string=2050&submit=B%C3%BAsqueda ) Na dia miasa 100% aza io dia manana ny fatiantoka aho fa TSY scan (satria tsy haiko hehehe).
Aorian'ny famakiana ity POST ity dia hamboariko mba hahafahako manonta amin'ny alàlan'ny LAN avy amin'ny solosaina miaraka amin'i Guindows. Tena misaotra!
Mamaly an'i Leps86
Misaotra tamin'ny fanehoan-kevitra !!! Manantena aho fa nanompo anao ilay lahatsoratra -ary hanampy-. mahafaly
Manoro hevitra anao aho hamaky kely momba ny hplip, ho hitanao tokoa ny fomba hamahana ilay olana amin'ny scanner.
Ediel dia hoy izy:
Mahamenatra fa tsy manan-tsafidy handrindrana ireo mpampiasa sy teny miafina momba ny fahazoan-dàlan'ny mpampiasa sy ny fitantanan'izy ireo.
Mamaly an'i Ediel
Manoro hevitra anao aho hamaky ny fanampiana miaraka amin'ny fonosana CUPS ihany. Ao amin'ny adiresy:
ho hitanao izao manaraka izao:
Ao amin'ny fikirakirana "standalone" misy anao dia vitsy ny loza mety hitranga amin'ny fiarovana - ny mpizara CUPS dia tsy manaiky fifandraisana lavitra, ary ny mombamomba ny mpanonta voazara ihany no ekeny avy amin'ny subnet ao an-toerana Rehefa mizara mpanonta sy / na mamela fitantanana lavitra ianao dia mampiharihary ny rafitrao amin'ny fidirana tsy nahazoana alalana. Ity pejy fanampiana ity dia manome famakafakana ireo ahiahy momba ny fiarovana CUPS ary mamaritra ny fomba hiantohana tsara kokoa ny mpizara anao.
Rehefa mamela ny fitantanana lavitra ianao dia hampiasa ny fanamarinana fototra ho an'ny lahasa fitantanana ny mpizara. Ny mpizara CUPS amin'izao fotoana izao dia manohana ny fanamarinana fototra, Digest, Kerberos, ary fanamarinana eo an-toerana:
Ny fanamarinana ifotony dia mametraka ny lahatsoratra mazava momba ny solonanarana sy ny teny miafina amin'ny tamba-jotra.
Koa satria ny CUPS dia mampiasa ny mombamomba ny kaonty sy ny kaonty tenimiafina, ny mombamomba ny fanamarinana dia azo ampiasaina hahazoana fidirana amin'ireo kaonty mety manana tombony amin'ny mpizara.
Soso-kevitra: Avelao ny fanafenana hanafina ny mombamomba ny solonanarana sy ny teny miafina - ity no default amin'ny MacOS X sy ny rafitra misy GNU TLS na OpenSSL napetraka.
Ny fanamarinana Digest dia mampiasa fizahana MD5 an'ny solonanarana, tenimiafina ary fonenana ("CUPS"), noho izany ny solonanarana sy tenimiafina voalohany dia tsy alefa amin'ny tambajotra.
Ny fampiharana ankehitriny dia tsy manamarina ny hafatra iray manontolo ary mampiasa ny adiresy IP an'ny mpanjifa ho an'ny sandam-bola tsy misy fetra, ahafahana mandefa "man eo afovoany" ary mamerina ny fanafihana avy amin'ny mpanjifa iray ihany.
Soso-kevitra: Alefaso ny fanafenana hanafina ny mombamomba ny solonanarana sy ny teny miafinao.
Ny fanamarinana ny fanamarinana eo an-toerana dia mandalo «mari-pankasitrahana» 128-bit izay manondro mpampiasa voamarina. Ny mari-pankasitrahana dia noforonina teny an-dalana avy amin'ny angon-drakitra an-tsokosoko ary voatahiry ao anaty rakitra ao ambanin'ny / var / run / kaopy / certs. Namepetra ny fahazoan-dàlana hamaky izy ireo: root + system-group (s) ho an'ny taratasy fanamarinana faka, ary lp + lp ho an'ny mari-pankasitrahana CGI.
Satria tsy misy afa-tsy amin'ny rafitra eo an-toerana ihany ny mari-pankasitrahana, ny mpizara CUPS dia tsy manaiky ny fanamarinana eo an-toerana raha tsy hoe mifandray amin'ny loopback interface (127.0.0.1 na :: 1) na ny socket domain.
Soso-kevitra: Ataovy azo antoka fa tsy ampidirina ao amin'ny sokajin-rafitra ireo mpampiasa tsy nahazo alalana.
Fandavana ny fanamafisana ny serivisy
Rehefa alefa ny fizarana mpanonta na ny fitantanana lavitra, ny mpizara CUPS, toy ny serivisy amin'ny Internet rehetra, dia mora tohina amin'ny fandavana ny serivisy amin'ny serivisy:
Mametraka fifandraisana marobe amin'ny mpizara mandra-pahazoan'ny mpizara tsy hanaiky intsony.
Tsy azo arovan'ny rindrambaiko fantatra izany. Ny torolàlana MaxClientsPerHost dia azo ampiasaina hanamboarana CUPS hametra ny isan'ny fifandraisana avela amin'ny mpampiantrano tokana, na izany aza tsy misakana ny fanafihana zaraina.
Torohevitra: ferana ny fidirana amin'ny rafitra sy tambajotra matoky.
Mamerimberina manokatra sy manidy ny fifandraisana amin'ny mpizara haingana araka izay tratra.
Tsy misy fomba mora hiarovana amin'izany amin'ny lozisialy CUPS. Raha avy any ivelan'ny tambajotra eo an-toerana ny fanafihana dia mety azo atao ny manivana fanafihana toy izany. Na izany aza, raha vao voarain'ny mpizara ny fangatahana fifandraisana dia tokony hanaiky farafaharatsiny izy ireo hahalala hoe iza no mampifandray.
Soso-kevitra: Tsy misy.
Tondra-drano ny tambajotra miaraka amin'ireo fonosana fandefasana amin'ny seranana 631.
Mety ho azo atao ny manajanona ny fitetezana raha toa ka voamariky ny lozisialy CUPS ity toe-javatra ity, na izany aza raha betsaka ny mpanonta printy misy ao amin'ilay tambajotra dia mety hieritreritra ny algorithm iray fa nisy fanafihana nitranga raha toa ka nisy fanavaozana marina azo.
Soso-kevitra: Sakano ny fonosana fizahana amin'ny tambajotra vahiny na tsy atokisana mampiasa router na firewall.
Mandefa ny fangatahana IPP ampahany; manokana, mandefa ampahan'ny sanda toetra ary atsahatra ny fampitana.
Ny kaody ankehitriny dia hiandry hatramin'ny 1 segondra alohan'ny hamoahana ny sanda ampahany ary hanidiana ny fifandraisana. Io dia hampiadana ny valintenin'ny mpizara amin'ny fangatahana mitombina ary mety hitarika any anaty fonosana fitetezana haidina, fa tsy hisy fiantraikany amin'ny fiasan'ny mpizara izany.
Soso-kevitra: Sakano ny fonosana IPP amin'ny tamba-jotra vahiny na tsy atokisana mampiasa router na firewall.
Mandefa asa printy lehibe / lava amin'ny mpanonta, manakana ny mpampiasa hafa tsy hanao pirinty.
Misy toerana voafetra hiarovana amin'ny asa fanontana lehibe (ny toetran'ny MaxRequestSize), na izany aza tsy hiarovana ireo mpanonta amin'ny mpampiasa ratsy sy hanonta rakitra izay miteraka pejy an-jatony na an'arivony.
Torohevitra: ferana ny fidirana amin'ny mpanonta amin'ny mpampiantrano fantatra na tambajotra, ary ampio fifehezana fidirana amin'ny haavon'ny mpampiasa raha ilaina amin'ny mpanonta lafo.
CUPS dia manohana ny fidirana 128-bit SSL 3.0 sy TLS 1.0 amin'ny tambajotram-pifandraisana amin'ny alàlan'ny tranomboky encryption OpenSSL, GNU TLS, ary CDSA. Ho fanampin'ny olana mety hitranga amin'ny fiarovana atolotry ny protokol SSL sy TLS, ny CUPS dia manana an'ity olana manaraka ity:
Fanamarinana / fanafoanana ny fanamarinana; CUPS amin'izao fotoana izao dia tsy manamarina na manafoana ny serivera na ny mari-pankasitrahan'ny mpanjifa rehefa mametraka fifandraisana azo antoka. Mety hitarika ho amin'ny "olona eo afovoany" sy fisandohana / fanararaotana amin'ny tambajotra tsy azo antoka izany. Ny kinova CUPS ho avy dia hanohana ny fanamarinana sy ny fanafoanana ny mari-pankasitrahana mpizara.
Soso-kevitra: Aza miankina amin'ny encryption ho an'ny fiarovana rehefa mifandray amin'ny mpizara amin'ny Internet na ny rohy WAN tsy atokisana.
Raha manana ianao.
osmel dia hoy izy:
Izaho dia vaovao amin'ny linux ary nametraka chakra ary na dia hitan'ny mpanonta aza fa tsy hitany ireo mpamily azy, dia tsy miseho ny brothermfc495cw iray ary ao amin'ny tranonkala ofisialin'ny marika, mitady ny tambajotra hitako ity bilaogy ity izay manome antsipiriany momba ny fametrahana avy amin'ny mpanonta, ny zavatra mahazo ahy dia miditra amin'ny pejin'ny kaopy aho ary izao rehefa mangataka anay sy ps aho dia tsy avelany hiditra. Ity amin'ny sisiny izay misy ifandraisany amin'ny mpanonta satria miditra amin'ny pejin'izy ireo aho nefa tsy misy olana.
misy sosokevitra rehetra. misaotra !!
Mamaly an'i osmel
mpampiasa dia hoy izy:
Tsy afaka mametraka aho, manampy mpanonta canon; avy amin'ny system-config-mpanonta amin'ny birao gnome; satria azoko ny hafatra na ny fifanakalozan-kevitra:
Error "FirewallD not running" rehefa manandrana mametraka mpanonta.
Vao nahita an'ity vahaolana ity aho tamin'ny:
amin'ny hevitra # 17 dia asehon'izy ireo ny vahaolana mazava.
Saingy mampifangaro ahy izany, ny zava-misy amin'ny famoronana rakitra:
Hanoloana ny fisie:
Rehefa mahita ny atin'ity farany aho dia hitako fa misy torolalana maneho hevitra izay manondro ilay rakitra tadiavin'izy ireo noforoniko, toa tsy hitako izay vahaolana hanoroana ny toromarika omena. Raha ny marina dia tokony hatao izany, saingy satria tsy azoko izay ataon'ireo torolàlana ireo dia tiako ny hanomezan'ny olona iray fanazavana.
Valiny amin'ny mpampiasa
Efa namaky ny lahatsoratrao aho, efa nametraka sy nanamboatra ny serivisy fanontana ihany aho rehefa manandrana manamboatra mpanonta printy xerox m 123 ary tsy mahita mpamily ho azy aho, ireo izay hitako tamin'ny internet dia tsy mandeha amiko. , manolotra zavatra manokana izy azafady azafady fa efa kivy aho, avy eo am-baravarankely mifandray mivantana aminy hanonta tsara.
Avy amin'ny linux no amboariko azy io no tadiaviko ao amin'ireo mpamily momba ny xerox saingy tsy hitako ny iray ho an'ny m123, misafidy iray aho izay heveriko fa mitovy aminy ary rehefa manonta pejy fanandramana dia manonta mihoatra ny 50 takelaka no diso
Manana Xerox Workcentre 3045NI aho, manao ny dingana voalaza fa tsy ny maodeliko .. ary manome ahy tolo-kevitra fotsiny aho, saingy misafidy tolo-kevitra aho ary avy eo mizaha toetra azy, milaza izy fa mandefa ny pirinty ary rehefa afaka fotoana fohy dia efa nanao pirinty io, fa tsy nisy na vita na inona na inona. VONJEO….!
kely dia hoy izy:
Fampiarahabana iray ao amin'ny tranonkalako misy tutorial momba ny fametrahana epson multifunction XP-510 raha sanatria ka manampy olona izany na manome anao hevitra:
Mamaly amin'ny bit
Ahoana no anontaniana antsika momba ny ID rehefa manonta pejy? Misaotra betsaka!
enrike dia hoy izy:
fanontaniana iray rehefa te hiditra windows aho http://10.1.1.1:631/printers/HP-1100. tsy fantany aho, inona no ataoko? Azoko fa tsy azo ampifandraisina amin'ny pirinty izy io
Valio i enrike
catya dia hoy izy:
Salama, tutorial tsara, fa manana olana aho, miasa amin'ny milina virtoaly aho, ny olana dia amin'ny client tsy hitako ny filaharana fanontana fa amin'ny servera azoko atao rehefa manonta avy amin'ny client aho. Afaka manampy ahy ve ianao? Misaotra 😉
Mamaly an'i catya
Gonzalo claderas dia hoy izy:
Salama maraina, rehefa manindry ny bokotra manampy mpanonta aho dia mahazo hafatra hampidirina solonanarana sy teny miafina ???
Valiny tamin'i Gonzalo Claderas
dofysoft dia hoy izy:
Salama, manana Linux Mint 13 napetraka ao amin'ny solosaiko pc aho. Ny olako dia rehefa te-hametraka amin'ny CUPs aho dia tsy hita ilay seranana mifanitsy. Ny mpanonta ahy dia HP Deskjet 400. Salu2.
Valio amin'i dofysoft
Wekmentor dia hoy izy:
Tsara, misaotra ny tutorial, nifindra monina tany Linux aho ary manana zavatra maro hamboarina.
Mamaly an'i Wekmentor
Reinaldo dia hoy izy:
Tokony ho fantatro, ahoana no ahafahako manamboatra ny rakitra fikirakirana ny kaopy 1.7.2, satria manana tamba-jotra amin'ny Ubuntu 14.04 aho ary hita fa rehefa apetrako ireo mpanonta dia hita ao amin'ny solosaina rehetra ao amin'ny tambajotra izy ireo ary misy izany nahatonga ny asako ho korontana satria tsy hitan'ny mpanjifa hoe aiza no hanononany pirinty… Nahavita zavatra maromaro aho toy ny fanovana ny kaopy sy ny lamina samba saingy tsy nisy. Tsy nahavita namaha ny olana aho, na izany aza dia nanana Ubuntu 12.04 aho ary tsy nanana an'io olana io raha tsy maintsy nanamboatra na inona na inona aho, dia nesoriko fotsiny ilay safidy mba tsy hahitako ireo mpanonta mifandraika amin'ny tamba-jotra ary dia izany ... raha afaka manampy ahy ianao azafady ....
Mamaly an'i Reinaldo
Salama Salama. Fandraisana anjara lehibe izany. Mametraha HP p1102w dia mandeha tsara izy, saingy mitranga amiko fa raha mandany mihoatra ny 5 minitra aho nefa tsy mampiasa azy, dia maty ny mpanonta na mety hiangona amin'ny angovo, izay rehefa mandefa pirinty dia tsy mahazo ary tsy mivoaka, mandra-pihodina ny mpanonta amin'ny tanana, asa iray manahirana satria zaraina ary raha tsy misy olona akaikin'ny PC host dia avela tsy misy pirinty ny tsirairay. Niezaka ny zava-drehetra aho, sintomy ny mpamily farany indrindra, 3.16.11, saingy tsy hitako izay hampiatoana na hanakanana ny mpanonta printy hatory ka mailo hatrany izy io.
Salama, salama maraina, manana olana aho, nametraka mpanonta zebra roa tao amin'ny mpizara ubuntu aho, nampiasa "kaopy" hametrahana ireo mpanonta ary avy eo nipoitra tamin'ny tambajotra ara-dalàna izy ireo, saingy mila manonta amin'ny alàlan'ny ZPL aho, ary mampiasa ny zebra fampitaovana fanamboarana, ary rehefa hitako fa manome ahy hadisoana aho dia mampiasa windows 10 aho, tsy haiko raha toa ka napetraka eo amin'ny windows ny programa ary tsy afaka mifandray aho, tsy haiko. Fa raha ny mazava, raha manonta tsara izy ireo satria mampiasa programa amin'ny orinasa misy azy aho dia manao pirinty amin'ny VPE ary manao azy tonga lafatra, mila izany amin'ny alàlan'ny ZPL fotsiny aho ary tsy afaka, raha afaka manampy ahy ianao azafady
phico dia hoy izy:
Carlos Santana: Mahagaga fa mbola ilaina ny antontan-taratasy iray nosoratana tamin'ny martsa 2013. Mbola tsy nampiasa mpanonta Zebra aho. Ary tsy haiko koa raha ny fiteny fifandraisana ampiasain'ny faran'ny rindrambaiko napetraka amin'ny alàlan'ny fampiasana Zebra Setup dia ny fiteny Zebra. Mieritreritra aho fa io dia ny endrika fampafantarana ilay antontan-taratasin'i Zebra alefa any amin'ny CUPS, ary tsy manohana azy ity farany.
Valiny tamin'i Fico
Sergio Avila dia hoy izy:
Salama, tolak'andro tsara, manana olana amin'ny fanontana amin'ny CentOS 6.9 amin'ny alàlan'ny Cups aho. Rehefa manandrana manonta, ny lahatsoratra dia mivoaka amin'ny endrika manta amin'ny HP Deskjet Professional 400. Efa nijery ny ppd an'ny kaopy aho, nitady ny fomba hampihenana ny vokatra mivoaka ary haka ireo fananana nofaritan'ny rakitra fanaraha-maso Runtime Cobol.
Rehefa mandefa ny pejy fanontana dia mivoaka kely ny pirinty, mihazakazaka. Fa rehefa mandefa ny pirinty dia mandeha tsara, tsy mandeha fa amin'ny endrika manta.
Misy sosokevitra ve?
Valiny tamin'i Sergio Avila
Ampidiro ny Debian Squeeze amin'ny birao Xfce
Esory ireo kinova-kernel teo aloha izay tsy ampiasainay